Warshad Sameynta, Shirkadaha Alaabada - Shiinaha Soosaarayaasha Qaab dhismeedka
Hordhaca Waxsoosaarka Nidaamka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Luowen 120 wuxuu inta badan ka kooban yahay qaab bir ah, guddi plywood ah, qafis isku dhejisan, isku-xidha, magdhawga magdhawga, dhejiska dhejiska, kor u qaadista qalabka wax lagu xidho, birta xajinta iyo riix riix riix, iwm 1. Qaab dhismeedka birta waa 18mm plywood oo dhumucdiisuna waxay ku daboolan tahay bir godan. 2. Qaabdhismeedka ayaa si aad ah loo xoojiyay, qaab-dhismeedka darbiguna wuxuu qaadi karaa cadaadis dhinaca dambe ah 60KN / m2 halka qaab-dhismeedka tiirarkuna uu qaadi karo 80 KN / m2. 3. Nidaam ahaan jaangooyo ahaan, waa mid jajaban in la isu geeyo, woo ...
Faahfaahinta 1. Miisaanka: Qiyaastii 15KG / Mitir Labajibbaarah 2. Waxyaabaha: PP + fiilooyinka muraayadda ah + Nilon 3. Qaab dhismeedka: Guddiyada,, xamili 4. La soo daayey: in ka badan 100 jeer 5.Eco-friendly: Haa 6. Heerkulka isbeddelka kulaylka: Ka sarreeya 150 degree Celsius 7. Isku soo wada duub oo kala furfuran: Fudud oo dhaqso ah 8.Cadeynta: Tijaabada CNAS 2.Tajarka Jumlada: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm Dhererka Gudiga: 750mm 3.Waxyaabaha iyo Qaab dhismeedka 1.Mattery: PP + fiilooyinka dhalada + Nilon 2. Qaab dhismeedka ： darfaha, geesaha, gacanka iyo qalabka 4.Feature 1. cimri dherer & ...
Faahfaahinta: 1. Miisaanka: Qiyaastii 15KG / Mitir Laba jibaaran 2. Waxyaabaha: PP + fiilooyinka muraayadda ah, iyo qabashada Nilon 3. Qaab dhismeedka: Guddiyada, koonayaasha, gacanka iyo qalabka 5. La soo saaray: in ka badan 100 jeer 6. Heerkulka isbeddelka kulaylka: Sare 150 darajo Celsius 7. Isku soo wada duub oo kala furfuran: Fudud oo dhaqso ah 8.Cadeynta: Xajmiga Tiirka Tijaabada CNAS: Laga soo bilaabo 200 * 200mm ilaa 600 * 600mm, cabir ka badan sida ka hooseysa jaantuska: Qalabka iyo Qaab-dhismeedka 1.Mattery: PP + fiilooyinka dhalada 2.Qab-dhismeedka , geesaha, gacanka iyo qalabka 'Feature 1.Long ...
Qaab dhismeedka alwaaxa alwaaxa qaab dhismeedka qaabeysan wuxuu ka kooban yahay plywood, dogob alwaax ah iyo walingng steel. Ku hagaaji plywood alwaaxda alwaaxa adoo riixaya boolal iskuxiran alwaaxda alwaaxda leh birta birta adoo ku dhejinaya flange way fududahay in la isu geeyo, la kala furfuro oo la hagaajiyo goobta. Waa miisaan fudud oo ku habboon dhismaha iyo gaadiidka. Dhismuhu sidoo kale waa mid saaxiibtinimo u leh deegaanka. Plywood wuxuu leeyahay waxqabad fiican. Plywood-ka wuxuu leeyahay hawo hawo wanaagsan iyo biyo nuugid, dhammeeyay ...
Shirkaddayadu waxay soo saartay badeecad cusub, pp muraayad dhaadheer oo qaab dhismeed isku dhafan, iyadoo loo adeegsanayo polypropylene ahaan waxyaabaha aasaasiga u ah, fiilada dhalada ah ee la xoojiyay ee walxaha isku dhafan, iyo caaryada oo ku riixaysa qaabab. Nidaamka qaab-dhismeedka wuxuu ka kooban yahay 65 qaab-dhismeedka dhumucda caadiga ah iyo 65 aluminium qaab-qaabeysan. Waxaa loo isticmaali karaa isku xirnaanta isku xirnaanta kala duwan si looga hortago culeysyada dhismaha ee kala duwan. Qiimo jaban iyo hawlgal fudud waa faa'iidooyinka ugu weyn ee pp fiber galaas dheer ...
FAA'IIDOOYINKA ABS Plastic FORMWORK: 1. Nalalka Nalka Laydhku waa ammaan, waa fududahay in la isticmaalo oo wax soo saar badan. Waa xaqiiqo in soo noqnoqoshada qalabka culus ay keento daal iyo dhaawac. Qaab-dhismeedka caagga ah ee Zhongming ayaa culeyskiisu yahay celcelis ahaan 17 kg / m2 oo aan lahayn hal cunsur oo ka culus 13 kg: taas macnaheedu waa in nidaamka oo dhan marwalba gacanta lagu isticmaali karo, xaalad kastoo jirta. Hawlgalka Crane maahan wax qasab ah in la sii wado, iyadoo la siinayo goobaha dhismaha dabacsanaan aad u ballaaran iyada oo aan wax u dhimayn caafimaadka iyo badbaadada 2.F
Hordhac wax soo saar Magaca buuxa ee Nidaamka Qaab-dhismeedka Birta ah ee 63 Bir waa Nidaamka Qaab-dhismeedka Dhismayaasha Dhismayaasha Birta ah ee loo yaqaan '63 Frame Plywood Dhismo-Qaab-dhismeed, ad-adeygeedu waa mid sarreeya oo dusha sarena waa siman yahay, waa la adkeyn karaa oo gebi ahaanba ama kala-goyn kara. 63mm guddi plywood: 12mm 2. miisaanka ： 30kg / m2. 3.Surface treatment: rinjiga lagu buufiyo 4. dib loo isticmaalay: ilaa 50 jeer 5. Cadaadis dhinaca ah: 30-40 KN / m2. Lambarka 6.Model: LWSF1063 7.Material: Steel Q235 3. Waxyaabaha Wax Soo Saarka 1.Cos badbaadinta 1) isu geynta fudud, dejinta iyo r ...
Hordhac wax soo saar ： Luowen cusub 63.5 Nidaamka Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka cusub wuxuu inta badan ka kooban yahay qaab bir ah, guddi plywood ah, qafis isku dhejisan, lamaane, waler magdhaw ah, usha xarkaha, jillaab kor u qaadista, birta xajin iyo riix riix riix, iwm. hore ayaa loo soo ururin karaa dhulka ama ka fogaan kartaa goobaha dhismaha ee adag. Adeegso qalabka si aad ugu dhejiso goobta dhismaha kuna shub tiirarka shubka. Marka foomka laga saaro dayactirka ka dib, muhiim maahan in gebi ahaanba la kala diro ...
Hordhac form Qaab dhismeedka Aluminium ayaa caan ku ah culeyskiisa fudud iyo xooggiisa awgood. Waxay u baahan tahay taageero yar iyo isku xirnaan. Qalabka aluminium ee qaab dhismeedka aluminium waxaa ka mid ah derbiyada, tiirarka, alwaaxda, taarikada, sheybaarada iyo looxyada darfaha. Xarkaha biinanka loo qoondeeyay ayaa loo isticmaalaa in lagu xiro sheybaarada. Nidaamka sheybaarka waa la burburin karaa marxaladda hore. Cabirka qeexida caadiga ah ee shaashadda darbiga waa 100mm-450mm X 1800mm-2400mm. Cabirka tilmaanta caadiga ah ee shaashadda saqafku waa 600 ...
Magaca: Filimka Wajaha Plywood: 1220x2440mm, 1250x2500mm ETC Dhumucdiis: 12/15 / 18mm ETC Muhiim: Poplar, Eucalyptus, hardwood, combi Glue: MR, MELAMINE, WBP Usage: Dhismo, xirmo xirxirida Dibedda: baaldiyo ama kartoon Qaab dhismeedka / xiridda waa nooc ka mid ah isticmaalka plywood. Plywood-ka loo yaqaan 'Formwork plywood' waxaa kaloo loo yaqaan 'Shuttering Plywood'. Filim soo wajahay plywood / MDO oo wajahay plywood / veneer alwaax ah oo plywood soo wajahay dhamaantood waxaa loo isticmaali karaa inay tahay Foom Shaqo. Koollada loo yaqaan 'Formwork plywood' waa xabagta WBP. Laakiin haddii aad u baahan tahay dhaqaale ...
Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Iskuxidhka Birta Cuplock, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock,